Axnew Display Technology Co., Ltd iphuhlise ngokwayo kwimalike yalo uboniso kwimizi abe njengenkosana ukubonisa technology.
Ukususela ngo-2009, Axnew Display Technology Co., Ltd iphuhlise ngokwayo kwimalike yalo uboniso kwimizi abe njengenkosana ukubonisa technology. Njengoko iminyaka onamava obungcali, isebe intengiso inika inkxaso yobugcisa kunye icebiso lobungcali kubathengi bethu, R & D ukusebenzisana iye njalo silwele bayile kunye nokubonelela abathengi bethu izisombululo elungileyo, wethu inazo yaphuhliswa A ebhodini / D kunye nokuqwalaselwa lugqithiselwa kuvavanyo industrial wathabatha CE , FCC, iziqinisekiso Rohs.
Iqela Production anawo amacandelo ngekhompyutha abazizityebi kunye nezibonelelo kubaniki, ezininzi iinzuzo ezininzi ziya kubonelela zizixhobo eziya kwenza ukuba sibe ngakumbi kakuhle, nemveliso, ngempumelelo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, uya kusomeleza yentsebenziswano phakathi Axnew kunye iiklayenti zethu, nto leyo eya kwenza thina zabathengisi zehlabathi.
Okwangoku siye saseka ubudlelwane bexesha elide neeklayenti kule umboniso kumgca industrial ehlabathini lonke.
ukubonisa AXNEW developes ishishini lethu nge imiboniso, Alibaba, umthombo Global iqonga B2B ngokukhawuleza ezi years.We ke ukholose ngabathengi entlantlu abenzi izixhobo orginal, ishishini isixhobo ulawulo, isilawuli esizisebenzelayo izicelo abasebenzisi esuka kumazwe angaphezu kwama-50.
Thina imile usebenzisa iipanele ezintsha original, ingakumbi kwibakala mveliso, ngokuba esweni zethu kunye displays.Our esingabizi ababoneleli ezizinzileyo ikakhulu panels Auo, abukhali, Chimei, Boe, Samsung, LG.
iimveliso Elungiselelweyo na ishishini lethu bexhamla kwangaphambili. Abathengi ukuba wabelane nathi naluphi na ulwazi malunga ngezimvo zakho uze makhe uguqule iimveliso ezisemgangathweni.
umoya Axnew yeemveliso ezithandwayo kunye okulungileyo, imigaqo inkonzo enokuthenjwa kusinceda senze ngcono.
● izisombululo monitor Industrial Grade
● izisombululo isakhelo LCD Vula
● izisombululo esweni touch Industrial
● imiboniso Bright High
● Touch solutions iiPC Panel
Ngo-2009, iimveliso Axnew'main ezi iiphaneli LCD 'ishishini sorhwebo kunye neesayizi standard ngamagosa okubeka esweni iimviwo isakhelo evulekileyo.
Ngo-2012, Axnew uye 3-4 iinjineli zobuchwepheshe ukuphuhlisa esweni zethu kwibanga mveliso. Sisungule eyakhe ibhodi yethu isilawuli mveliso kunye lobushushu ububanzi (-25 degrees to degrees 80), ukuxhasa ukubonisa yethu kwindawo yokusebenza ezinzima.
Ngo-2014, iimveliso zethu ithandwayo esweni pro-capacitive ukuchukumisa, touchs zoshishino kunye IP65 bezel front panel entabeni, imiboniso brightess eliphezulu kwizicelo ongaphandle, leyo uthabathe malunga 45% -50% kumazwe umthamo.
Axnew ezisungulwe ngempumelelo ubudlelwane bexesha elide neeklayenti kule umboniso kumgca industrial ehlabathini lonke. Zonke iziboniso abanawe CE, FCC, ukuthobela rohs.
Ngowe-2016, Axnew akunika ishishini lethu yaye gurantees inkonzo yethu yesiqinisekiso, amanye amahlakani eJamani, Canada unako ukwenza ulondolozo esisiseko, imveliso yethu engundoqo kunye isevisi yesiqinisekiso e China.
Ngapha koko, imiboniso Hongkong Electronic, Taiwan Computex, imiboniso Shanghai isikrini etc kuya kusinceda ukuba ukubonisa iimveliso zethu ngokucacileyo. platform B2B, umzekelo Alibaba wayiyeka abathengi bethu ukwenza le misebenzi ngokulula.
Njengoko iminyaka onamava obungcali, thina besithembe ngabathengi entlantlu abenzi izixhobo orginal, ishishini isixhobo ulawulo, isilawuli esizisebenzelayo izicelo abasebenzisi esuka kumazwe angaphezu kwama-40.
Ngoku Silungiselela distrubutor yokuqala eYurophu. Axnew ngokunyanisekileyo ubheka phambili intsebenziswano yakho!
Iqela lethu Axnew ibandakanya Team angaphesheya kwiintengiso, Iqela intengiso baseKhaya, R & D Centre, iSebe Financial, Human Resource Department, Production Factory.
Thina Iqela uselula, kunye neminyaka onamava obungcali, isebe iintengiso kunye neqela lobugcisa nokubonelela ngenkxaso yobugcisa kunye icebiso yobungcali kubaxumi bethu.
mveliso lethu libandakanya workshop igumbi ezicocekileyo, imigca yemveliso 2, 1 igumbi eluvundwini, 2 zokugcina impahla.
Abathengi lowo ibiba Axnew wayeza kufumana inkxaso zexesha elide ngaphandle kwelo shishini.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ngokukhululekileyo!
1.Once unomdla iimveliso yenkampani yethu, nceda ungathandabuzi uphando thina yethu isebe yokuthengisa inika inkxaso yobugcisa kunye icebiso lobungcali kuwe kwisithuba seeyure ezingama-48; R & D ukusebenzisana iye njalo silwele ukuba bayile baze bakunike izisombululo elungileyo.
2.Every ukuze nokuba izixa ezincinane okanye bulk kuya kuxhomekeka ucwangciso lwethu processing kunye neenkqubo zokuvelisa, elivumelana ngqo Enterprise Resource Planning (ERP) ukuthobela.
Umncedisi inkonzo 3.Professional wayeza umkhondo yakho iimeko iimpahla kunye nobume sentengiso emva kwakho. Sinethemba lokuba migaqo yethu inkonzo credible ukuba makhe ukuseka ubudlelwane bethu nentsebenziswano efanayo.
4.For imiyalelo yethu, thina ikakhulu wazifaka izibonda ezo imiqathango zewaranti emva befika kwindawo yakho. Ngoko ke bekuya kuba iinkonzo DOA kunye RMA ngaphakathi isiqinisekiso. Ngesiqhelo unyaka 1 isiqinisekiso ukuze umgangatho, siya Ungalwandisa ukuya kwiminyaka-2 yesiqinisekiso uma sivumelene kunye nabathengi bethu. Kwiminyaka 3 isiqinisekiso kufuneka kuxoxwe kunye kwezinye iiprojekthi ezizodwa.
ibhodi isilawuli Industrial kunye ngokubanzi temperatureto ukuxhasa esweni zethu kwindawo yokusebenza ezinzima. okubeka esweni iimviwo zethu CE-EMC, CE-LVD, FCC, ukuthobela Rohs.
Lwedilesi: Phantsi Floor, Yin Lian Tong Industrial Park, Ai Lian Zhangbei Road No.460; Long gang District, Shenzhen China518172